Adobe Kadib Saamaynta CS3, CS4, CS5, CS6 iyo buugaagta buugta ee Isbaanishka | Abuurista khadka tooska ah
Waa mid ka mid ah codsiyada ugu adag ee guriga Adobe, gaar ahaan tirada badan ee astaamaha ay na siiso awgeed. Sidaad ogtahay, waa codsi qaab daraasad ah oo loogu talagalay abuurista curinta iyo xaqiijinta sawirro xirfadeed firfircoon, oo ay weheliso video montage iyo audiovisual saamaynta gaar ah. Waa mid ka mid ah softiweerrada jira ee maanta jira oo leh nidaam waqtiyeed oo leh awood dheeri ah.
Mid ka mid ah sababaha ay codsigan u tahay mid baahsan oo mid ka mid ah wuxuushyada ka socda muuqaalka maqalka, ayaa ah xaddi badan oo plugins taas oo loo abuuray in lagu kabo. Shirkado badan oo ka baxsan Adobe waxay wax weyn ku soo kordhiyeen arjiga tanina waxay keentay waxqabad wanaagsan, dheecaan iyo awood. Waxay ka timid noocyada 6.5 iyo 7 halka ay ku bilaabmayso inay ku yeelato joogitaan weyn, gaar ahaan maxaa yeelay waxay heshay a waafaqid weyn oo leh qaabab badan oo fiidiyow iyo maqal ah.
Qoraalkan waxaan kuugu keenaynaa buugaag ku qoran Isbaanishka laga bilaabo nooca CS3 illaa CC (xusuusnow in buugga loogu talagalay nooca CC uu si fiican ugu shaqeynayo nooca CS6, maadaama farqiga u dhexeeya labada nooc uu aad u yar yahay). Waan ognahay in raadinta buugaagta shabaqa laga helo ay noqon karto wax xun, taasi waa sababta aan u rabno inaan ku siino fiilo. Iyadoo aan waxbadan la dhihin, waxaan rajeyneynaa inaad ka heshay iyaga iyo inay wax kuu tarayaan si aad u barato sida loola shaqeeyo aaladdan weyn. Haddii xiriir kasta uusan shaqeynin, nooga tag faallo:
Ka dib Raadka CS3: https://drive.google.com/file/d/0BwZdz3RYEcO6YlpBLUE3SlBjbU0/edit?usp=sharing
Ka dib Raadka CS4: https://drive.google.com/file/d/0BwZdz3RYEcO6RXc1WTR5bXhuY3c/edit?usp=sharing
Ka dib Raadka CS5: https://drive.google.com/file/d/0BwZdz3RYEcO6Z1Zsd1FDV2dlLW8/edit?usp=sharing
Saameynta Kadib CS6 / CC: https://drive.google.com/file/d/0BwZdz3RYEcO6cmJOZ1p3TXFYNzg/edit?usp=sharing
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Adobe Kadib Raadka CS3, CS4, CS5, CS6 iyo buugaagta gacanta ee Isbaanishka
Ignacio wuu soo baxay dijo
Mahad badan. Tan, xagaaga inta u dhexeysa iyo dhawr kun oo saacadood oo jimicsi ah ayaan fikrad ka heli karaa.
Jawaab Ignacio figueredo
Taasi waa dabeecadda! ;) Dhamaan kuwa ugufiican!
okay..Xagee ka bilaabaa hadaanan wax fikrad ah ka haysan isticmaalkeeda?
Ku jawaab Gargantua
waxbarasho heer sare ah
Waxaan u maleynayaa in ka dib marka ay soo ifbaxdo ay tahay mid ka mid ah barnaamijyada ugu xiisaha badan kuwa naga mid ah kuwa ku hamiya fanka toddobaad
in la barto ayaa la yiri